Amaqembu acele ukusizwa yinkantolo ngolukaZuma
Cape Town - INkantolo eNkulu eKapa izolalela isicelo esiyisipesheli esifakwe ngamaqembu aphikisayio sokuzama ukuphoqa iPhalamende ukuthi livume kube nenkulumo mpikiswano ngodaba oluthinta uMengameli uJacob Zuma njengoba amaqembu ethi awasenakho ukumethemba.
Isicelo lesi sihanjiswe wumholi weDemocratic Alliance ePhalamende uLindiwe Mazibuko, ethunywe ngamanye amaqembu aphikisayo.
Amaqembu afuna kubanjwe inkulumo mpikiswano mayelana nokuthi kuvotwe kuchithwe uZuma, abathi abasamethembi - amaqembu athi afuna kuthi kuphothulwa unyaka kube kuqediwe ngalolu daba.
Mhlaka-08 Novemba uMazibuko watshela iPhalamende wathi abasamethembi umengameli, wathi ngaphansi kobuholi bakhe izwe libhekane nezinxushunxushu ezihlanganisa ukukhula kwesibalo sabantu abangasebenzi, inkohlakalo kanjalo nokwehla kwezinga lemfundo.
Amaqembu eyisishiyagalombili ahlanganisa i-African Christian Democratic Party, yi-Azanian People's Organisation, iCongress of the People, iFreedom Front Plus, Inkatha Freedom Party, yi-United Christian Democratic Party kanye ne-United Democratic Movement, avuma ngo-elethu lokhu kusho.
Ngesonto eledlule iqembu elibusayo lavimba amaqembu emizamweni yokuthi kudingidwe bese kuvotwa ngalolu daba.